၁၀တန် အတွေးစုများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၁၀တန် အတွေးစုများ
Posted by ဆူး on Oct 31, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 35 comments
ဆူး စိတ်ကူး ၁၀တန် အတွေးစု
၁၀တန် အတွေးစုများ ဆိုလို့… ဘာများလို့ မထင်နဲ့.. တခါမန်းရင် ၁၀ပေးတယ်လေ.. မန်းတာတွေ လိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ တယောက်တမျိုးတွေး.. တယောက်တမျိုးရေး.. တနေ့တနေ့.. ဖတ်ပြီးသားလည်း သူများ မန်းရင်.. ပြန်ဝင်ဖတ်ရတာ အမော.. အစိုးမရတဲ့ အင်တာနက်.. မရတော့လည်း တမျိုး.. ရတော့လည်း.. တမျိုး.. အမျိုးမျိုး အထွေထွေ.. စစ ၀င်ဖတ်တုန်းက တခါတလေ အပျင်းပြေ.. နောက်များ အကောင့်လုပ်တော့လည်း.. သူများရေးတာ ၀င်ဖတ်ပြီး မန်းလိုက်.. မန်းတာများတော့.. အမြင်ကတ်ခံရတာတွေ အငြင်းအခုန် လုပ်တာတွေ ဖြစ်ကုန်ရော.. အမျိုးမျိုး မန်းတာတွေ ကြားမှာ.. မပျင်းရအောင်.. ဟာသနှော သူများကို ကျီစယ်နောက်ပြောင် အပျင်းပြေရင်း ငြီးငွေ့စရာမကောင်းအောင် မန်းလိုက်ရင်းနဲ့.. သူများတွေ ငပေါဆိုတာ လူတွေ သိကုန်ပြီ.. ခက်တော့ ခက်ကုန်ပြီ..
စကား စကား ပြောပါများ.. စကားထဲက ဇာတိပြ.. ဆိုလို.. ဖြစ်နေပြီ။
အတွေးတမျိုးစီနဲ့.. မတူညီတဲ့ စိတ်ကူးများကြားမှာ.. ဗဟုသုတနှင့် အတွေးအခေါ် ဖလှယ်ကြတဲ့ အတွက် မသိတာတွေ သိရတယ်.. သိတာတွေလည်း ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
အတွေးစိတ်ကူး ဖလှယ်ရင်းနဲ့.. အမုန်းမပွားအောင် တတ်နိုင်သလောက်တော့ ရှောင်ပါတယ်..
ဒီမှာ ရှိတဲ့ လူတွေက ဆူးထက် အသက်အားဖြင့် တော်တော် ကြီးမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အပြင်မှာ ဆို နောက်ပြောင်ဖြစ်မယ် မထင်ဘူး.. လူမမြင်ဘူးတော့.. အကောင့် နာမည် တခုကိုဘဲ သိတာဆိုတော့.. အသက် လူမျိုး အသား အရောင် ဆင်းရဲ ချမ်းသာ မသိပါဘူး.. တခါတလေ.. စိတ်ထဲ အမြင်မတော်လို့ ကစ်လိုက်တာတော့ ရှိတယ်။ ခံလိုက်ရတဲ့ သူတွေတော့ သိကြပါတယ်။ ကွယ်ရာမှာတော့ အပြောခံနေရပြီ ဆူးကို စွာတယ်တဲ့.. တခြားတော့ မသိဘူး.. ဘာတွေ ပြောနေသလဲ ဆိုတာ.. ဘာပဲ ပြောပြော.. လွန်တာရှိရင် ၀န္တာမိ တောင်းပန်ပါ၏..ခွင့်လွတ်ပေးပါလို့ဘဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ဆူး စပြီး မန်းခါစတုန်းကတော့.. ဆူး ရေးတဲ့ မန်းတွေကို အမြင်ကတ်တဲ့ လူတယောက်တော့ ရှိတယ်.. အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ် စိတ်တွေ လျော့အောင် နောက်ပြောင်ရင်းနဲ့.. အခု ဆူး နဲ့ လိုင်းတူပြီး လိုက်နောက်တတ်နေပြီ။
ဖြစ်ပျက်တွေ မြန်ဆန်လွန်းတဲ့ အင်တာနက်ကြောင့် အခု လိုင်းတက်ပေမဲ့ တော်ကြာ လိုင်းကျမှာ စိုးသည့်အတွက်.. စိတ်ကူးထဲက အတွေးနဲ့ အရေးအသား အလန်းလေးတွေ နောက်များမှ ပရိတ်သတ်များ ဖတ်ဖို့ တင်ပေးပါ့မယ်။
ဒီဆိုက်ကိုတော့ အလွန်ခင်ပါတယ်။ အဘန်းမခံရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ဒီတိုင်းဝင်တာတောင် အစိုးမရတဲ့ အတွက် ကျော်ခွဝင်ဖို့ ဆိုတာ သိပ်တော့ မလွယ်ဘူးထင်တယ်။
အားလုံးလည်း ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့ အတွေးနဲ့.. ကောင်းကျိုးလိုရာ ဆန္ဒပြည့်စုံကြပါစေ။
ဆူး မမန်းလျှင် အတော်ပျင်းစရာကောင်းမည် …
စိတ်မဆိုးပါ မန်းချင်သလောက်မန်းပါ …
ဒီတလော အင်တာနက်က မကောင်းဘူး ဆိုသော်ငြား.. ပလန်းနက် ဖိုရမ်လေးက ဒေါင်ဒေါင်မြည်နေတာဘဲ.. အဲဒီမှာ သောင်းကျန်းနေတာ..
ဆူးနက်က သာမန်မဖြစ်နိုင်ဘူး … အဆင့်မြင့် နက်ဖြစ်ရမယ် …
ထီပေါက်ရင် .. ၁၀ကို ဒေါ်လာ၁၀လို့ ပြင်ပေးပါမယ်နော..။
ဦးလေးပြောမှဘဲ.. အဖေက သူ့ညီမ ဆူး အဒေါ်ကို နောက်သလို ဖြစ်နေပြီ.. ငါထီပေါက်ရင် ငါ့ညီမကို တီဗွီ ၀ယ်ပေးမယ်.. အဒေါ်ကတော့ ထီပေါက်ပါစေ ဆုတောင်းတယ် ပြောတာဘဲ.. တခါမှလည်း ထီ မပေါက်ဘူး.. နှစ်တွေသာ ကြာလို့ အဖေ သာ သေသွားတယ်။
အဟိ..ကိုkaiရေ ဆူးကတော့ မြန်မြန်နှင်နေပြီ။ မသွားချင်သေးရင်တော့ ၁၀ဒေါ်လာသာ ပေးပေတော့။
ဦးကြောင်ကြီးနော်.. အရမ်းကြီး လှော်မနဲ့လေ..
ဦလေး ကိုင် ကို ဆူး ဘ၀မှာ ရင်းနှီးကျွှမ်းဝင်တဲ့ ဥပမာ ပြောပြတာပါ..
၁၀တန် မန်း က နေ ၁ကျပ်တန် မန်း ဖြစ်လည်း ကိစ္စမရှိဘူး.. မန်း ချင်လို့ကို မန်းနေတာ.. ညက်ချိ နောက်လို့ ဆဲချင်နေတဲ့ သူတွေ အဆဲခံရ သက်သာအောင် ဒီပိုစ်တင်လိုက်တာ.. မန်း အုံးမှာ..
comment တွေစိတ်ထဲရှိတာရေးပေမဲ့ ကိုယ့်email address က ပို့စ်တင်တဲ့လူဆီရောက်သွားတာကတော့ သိပ်မမိုက်ဘူးထင်တယ်နော် ။ တစ်ချို့နိုင်ငံရေး ပို့စ်တင်တဲ့လူတွေကို ကိုယ်တွေက မခံချင်စိတ်နဲ့ပြန်ရေး သူတို့က ကိုယ့် email address သိသွားတော့ အစိုးရလက်ပါးစေဖြစ်နေဦးတော့ ကိုယ့်စာတွေ ၀င် ဟက်တော့မှာပေါ့… ။ ကြုံဖူးပါတယ် အဲ့ဒါမျိုး ။ ကံကောင်းစွာနဲ့ white hacker ဖြစ်လို့စာတွေဖတ်ယုံပဲဖတ်ပြီးဘာမှ ကလိမသွားတာ ။
အဆိုးအကောင်း ၂ မျိုးဖြစ်နေတယ် .. ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ ကွန်မန့်ပေးလာရင် ချက်ခြင်းသိတော့ ပြန်ဖြေရလဲလွယ်တယ် … မြန်မြန်သိရတာပေါ့ .. နို့မို့ဆို တကူးတက ခဏခဏပြန်ဖွင့်ဖတ်နေဖို့ မလွယ်ဘူးလေ ..
မကောင်းတာကတော့ ခုန အီးတုံးပြောသလိုပေါ့ …
ပိတ်လိုက်ပါ.. အာရုံနောက်တဲ့ အင်ဗိုက်တွေ မလာတော့ဘူးပေါ့
ဘယ်လိုအီးမေးလ်လက်ခံရသလဲသိချင်လို့ kai@myanmargazette.net ကိုရထားတာလေးတခုလောက်ပို့ ပေးပါလား..။
တတ်နိုင်ရင်တော့ ကော်မန့်ပေးတဲ့သူရဲ့အီးမေးနေရာကို ဖြုတ်လိုက်မယ်လေ..။
လာတဲ့ မေးပုံစံ အတိုင်း ပြန်ပို့လိုက်တယ်
ကိုခိုင်ရေ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အခါပြတဲ့ အီးမေးလ်ကိုပြင်လိုက်တာ ကောင်းတယ်။ ကိုယ်လိပ်စာကို သူများ မသိတော့ဘူးပေါ့။ တခါတခါ ကွန်းမန့်မိန်းပေ့ခ်ျမှာလည်း အီးမေးလိပ်စာ ပေါ်နေတာ သတိထားမိတယ်။ အဲဒါလေးပါ တခါထဲလုပ်ပါအုံး။ သတိပေးလက်စနဲ့ ဖတ်သူအရေအတွက်ကို ပို့စ်တခုချင်စီရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ တန်းတွေ့ရဖို့လည်း လုပ်ပါအုံး။ ကျေဇူးပါ ခင်ဗျား။
ုကိုခိုင်ရေ Sender’s Email နေရာဖြုတ်လိုက်ဗျာ … သူများ Website တွေမှာလဲ Comment ပေးရင် Email တွေဝင်တာပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ Sender’s real Email မပေါ်ဘူးဗျ။ လုပ်ပါ အဲလိုမျိုး။
၁၀တန် အတွေးစု မှာဘဲ ၀င်ပြီး ထပ်မန်းလိုက်မည်။
အတိတ်အကျိုးပေး မကောင်းလို့.. ဖြစ်တည်နေတဲ့ ဘ၀ကို လက်ခံနားလည်ပေးပါတယ်။
လိင်၂ခုပါတဲ့ တိရိစ္ဆာန် ရှိတယ်.. ၂ခု ပါတဲ့ အကောင်တွေက ၁ခု ပါတဲ့ အကောင်တွေထက် ပိုပြီး ဆန္ဒပြင်းထန်ကြတယ်။ လူဖြစ်သော်လည်း လူမှာ ပုံမမှန်ဖြစ်ရင်လည်း အတိတ်ကာမ မပြုအပ်တာ ပြုမိတဲ့ အကျိုးပေး မကုန်သေးလို့ ဖြစ်နေကြတာ.. ထို့အပြင် ကံအကျိုးကြောင့် ရတဲ့ ကိုယ်မှာလည်း ရတာ မလို မအပ်တာ လိုနေပြန်တဲ့ လူကတွေကလည်း သာမာန်လူတွေထက် ပိုမိုကြီးမားတဲ့ ဆန္ဒတွေ ရှိနေတဲ့ လူစားမျိုးတွေပါ.. ဂေဇတ်မှာ အစဉ်မပြတ် စာရေးစာဖတ်နေပေမဲ့.. တနေ့တနေ့.. လိင် လိင် လိင် ဆိုတာတွေကြီးဘဲ ဖတ်နေရတာ ငြီးငွေ့လှပြီ.. ကိုယ်ပိုင် အတွေး သိပ်ပြင်းနေပေမဲ့ သူများ အတွေး သိပ်မပြင်းထန်သူအဖို့.. ဒီစာတွေ ဖတ်ရတာ ပူပြင်းလွန်းတယ်
ဆြာဆူး မန်းလွန်းအာကြီးလို့ လူနာတွေတော့တော်တော်သက်သာသွားမှာပါ
ကိုခိုင်ကတော့ ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးပေးနော် (ထီပေါက်ရင် .. ၁၀ကို ဒေါ်လာ၁၀လို့ ပြင်ပေးပါမယ်နော..။ သေသေချာချာ ကတိပေးပါတယ်..။)
သင့်တော်သလိုသာပြင်ဆင်ပါ အမြဲတမ်းဖတ်တယ် မဖတ်မှာကိုစိတ်မပူနဲ့
၁၀ တန်းထဲပဲ ၀င်မန်းလိုက်အုန်းမယ် … ကျွန်မအိမ်မှာ ခွေးထီးတစ်ကောင်ရှိခဲ့ဖူးတယ် … ဒီကောင်က အထီးတွေကို သွားသွားခွနေလို့ တချိန်လုံး ပြန်အကိုက်ခံရတယ် … အခုမှစဉ်းစားမိတယ် .. ဒီကောင် ဂေးလ် ပဲ .. တရိစ္ဆာန်ထဲမှာလဲရှိပါတယ် … သတိမထားမိကြလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … ကြောင်မတစ်ကောင်ကလဲ အသက် ၁၅ နှစ်အထိ အပျိုစစ်စစ်ဘ၀နဲ့နေသွားတာ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ် … သူလဲ ဂေးလ်ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ် …
ကြောင် အပျိုစစ်စစ် ဆိုတော့လည်. ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် ရှိတာပေါ့.. အလှတောင် မပျက်ဘူး..
ဆူးရေ……..ငါတို့တို့ ဘာပို့စ်မှ တင်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်…ကယ်ကျပါဦး..။
ကို အာဂ က ဘာလို့ ပိုစ်တင်မရတာလဲ.. အင်တာနက်မကောင်းလို့လား.. ဆူးလည်း မနေ့က ရေးရင်းနဲ့ ပျောက်သွားလို့ အစ ကနေပြန်ရိုက်ရတယ်.. နှစ်ခါ ပင်ပန်းသွားတယ်.. ဒီနေ့တော့ စာအသစ်တင်ချင်စိတ်မရှိလို့ မတင်ရသေးတော့ မသိဘူး..
ဝေဝေရေ အထီးအချင်းချင်းလိုက်ခွနေတာနဲ့ ဂေးမဟုတ်သေးပါဘူး။
လူမှာလည်း ယောကျာင်္းလေးအချင်းချင်းနောက်သလိုဆော့သလို ကလေးတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ကြောင်ဆိုတာ လူရှေ့သူရှေ့ ဟိုဟာမလုပ်ဘူးလေ။ နောက်လုပ်ပြီး မျိုးမအောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပြောပုံအရဆို လူမအပျိုကြီးတွေက တကယ်မစစ်တာလား၊ ဂေးပဲလား
ဦးလေး လင်းဝေကျော်.. သိပ်အညားကြီး မတွေးပါနဲ့.. တွေးတာများရင်.. အားလုံးက ဘာတွေမှန်းကို မသိဘဲ ဖြစ်ကုန်တော့မယ်.. အတွေးလေးတွေ နဲနဲ လျော့ပါအုန်း.. တွေးရင်းနဲ့.. လူတွေလည်း ဂေးဖြစ်.. ခွေးတွေလည်း ဂေးဖြစ်.. ကြောင်တွေလည်း အပျိုဖြန်းလေးတွေ ဖြစ်.. ရွာထိပ်က ကံကော်ပင်ကြီးလည်း ပိတောင်ပင်ဖြစ်သွားအုန်းမယ်..
တစ်ဆယ်ဘဲရပေမယ့် တစ်ဆယ်မက တန်သောခင်မင်မူများက ဒီကော်မင့်လေးတွေပေးတာကနေ
မန်းပါ ကြိုက်သလောက်မန်းပါ။ မမန်းမှာကိုတောင် စိုးရိမ်နေတာပါ။
ကလောင်နာမယ်မှာ အသက်အရွယ် ရာထူး မရှိပါ။
အပြင်မှာ အမှန်တကယ်ကြီးပေမယ့် ငယ်လို့ရတာကတော့ ကလောင်နာမယ်ဘဲရှိလို့ပါနော်.
သွတ် သွတ် သွတ် …………………………………………..
ကျွန်တော်လဲ တစ်ဆယ် ၀င်ယူသွားပြီ
တူမ ဆူးရေ တွေးတာများတာ မဟုတ်ရပါဘူး။
ဟိုအခြောက်တွေက ဟိုမုန်းကို အကြောင်းပြလို့ ပြောမိရင်းဆက်သွားတာ။
ရွာထိပ်က ကံ့ကော်ပင်က ဘာဖြစ်လို့ ပိတောက်ပင်ဖြစ်ရမှာတုန်း။
ပိတောက်ဆိုပိတောက်ပဲ…. ဦးလေးတို့ကတော့။ ကံ့ကောက်ဆိုလည်း ကံ့ကော်ပေါ့လေ။
ပြောမှပဲ ဒီလို ဆောင်းဦးပေါက်မှာ ကံ့ကော်လေးတွေပွင့်ကြတာကို မိန်းထဲမှာ တက်ခူးကြဖူးတာမှတ်မိသေးတယ်။
ကိုလင်းဝေကျော်ရေ.. နာမည်တပ်ပြီး ပြောလိုက်တာ ဆောတီးပါ.. အမှန်တော့ နှစ်ယောက်လုံး ကိုပြောတာပါ..
ဆူးပြောတာ တဲ့ ကံကော်ပင် က ပိတောက်ပင် ဖြစ်မယ် ဆိုတာ..
ကံကော်ပင် မပွင့် နိုင်လွန်းလို့.. စပ်မိ စပ်ရာ.. ၁နှစ်မှာ ၁လ.. ၁လမှာ.. ၁ရက်.. ပိတောက်များ ဖြစ်နေမလား.. အော်.. အဲဒီ ၁ရက်က ငါဖျားပြီး နေမကောင်းလို့ အိပ်ယာထဲ လဲနေတဲ့ နေဖြစ်နေပါအုန်းမယ်လို့.. ဆက်တွေးပြီး ဟင်းးးး ချလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်ကို ဆိုလိုတာပါ.. အတွေးများတော့.. ဟိုဒင်းက ဟိုဟာဖြစ်.. ဟိုဟာကို ဟိုဒင်းလို့ လက်ခံ…. အမှန်တော့ အခြောက်တွေ စာတွေ များလို့ အမြင်ကတ်နေတာတော့ ကြာပြီ.. ရေးလိုက်ရင် ကာမ ကိစ္စနဲ့ မလွတ်ဘူး. လိင် ပြီးရင် လိင်နေကြတယ်… ဘယ်လိုဘဲ လိမ် လိင်.. ဘာမှ မကောင်းဘူး.. အားလုံးက သူ့သဘော သူဆောင်နေပေမဲ့.. မျက်စိရှုပ်တာတော့ အမှန်ဘဲ..
တစ်လိမ် နှစ်လိင် ပွေလိင်ရှုပ်တယ် …မျက်စိနောက်ပါ့ကွယ်။
ကိုယ်ဝင်မန့်လိုက်တာတောင် ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ဆက်သာရေးပါတဲ့။ ဂျော်က ဂျော်ကို မြှောက်ပေးနေတာ။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးရေးစမ်းပါ နုလွန်းလို့ ခံစားမရဘူးဆိုသေးတယ်။
ကြောက်လာလို့ ဆက်မပြောတော့ဘဲ ဒီဘက်မှာ လှည့်လာရတာ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆူးပေါ်ဖက်ကျလည်း ဆူးကျိုးမှာ စိုးရတယ် မဟုတ်လား။
ဆူးပေါ်ကို ဖက်ကျလာရင် ဘာလုပ်မလဲ ဟင်….။
ဆူးပေါ်ဖက်ကျလာရင် ဆူး ကျိုးမှာ သေချာရင်တော့ ရှောင်လိုက်မယ်.. လယ်ဗယ်တူ ဆိုရင်တော့ နဲနဲ ပြိုင်ဖိုက်လိုက်မှာပေါ့.. သူတို့လည်း စကား တတ်သလို ကိုယ်လည်း စကားတတ်တာဘဲ..
မမိုက်ရိုင်းချင်လို့ ယဉ်ကျေးတဲ့ အသုံးနဲ့ လူနားဝင်အောင် ပြောနေတာ..
အသုံးအနှုန်းဆိုတာ လူ့ အဆင့်အတန်းကို ဖော်ပြတယ် ဆိုတာ တခြားနေရာမှာထက်.. လူမမြင်ရဘဲ နစ်တခုဘဲ သိတဲ့ မန်ဘာတွေ အတွက် ပိုမှန်တာပေါ့ကွယ်..
အခြောက် အင်အားစုကို သိမ်းသွင်းပြီး မြန်မာပြည်မှ ၁၈နှစ်နဲ့ အထက် မဲပေး နိုင်တဲ့ သူတွေ အဲဒီ ပါတီကို မဲပေးကြမှာပါ.. ဘာလို့လဲ ဆိုတော့.. အဲဒီ ပါတီ အနိုင်ရခဲ့ရင်.. အခြောက်ဆိုတဲ့ လူတန်းစားအတွက်.. နေရာ တခု.. ပေးမယ်လို့.. အရိပ်အမြွက် ခံဝန်ကတိ ပေးသွားတယ်.. အခြောက်တွေရဲ့ လူရှေ့မရှောင် သူရှေ့ မရှက်.. လိင် စကားနဲ့ လိင်ဖော်ထုတ်မှုတွေကို အားပေး အားမြောက် ဖြစ်သင့်တယ်.. လုပ်သင့်တယ်.. လုပ်ပါ.. အားပေးတယ်နော်.. လူ့ အခွင့် အရေး.. လူမျိုးစုတွေရဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုတာ မစဉ်းစားဘူး.. မြှောက်ပေးတဲ့ အတွက်.. မဲရဖို့ သေချာနေကြောင်း… ဆူးကတော့ ဘယ်ပါတီမှတော့ မဟုတ်ဘူး.. မဲကတော့ သွားပေးမှာ ခြင်္သေ့ မဟုတ်ရင် ပြီးရော.. သို့သော်.. အခြောက်မြှောက်စား.. လိင်မှုအားပေး ကာမရက်ရော ဖြစ်သင့်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားတွေ သုံးတဲ့ ပါတီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သေချာပေါက် အမှန်တခြစ်.. ထိုနေရာ အတွက် မဖြစ်သင့်တော့ဘူး ထင်တယ်။ လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ပိုင်ခွင့် ရှိသလို လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနိုင်တာ လူ့အခွင့် အရေးလို့ ယူဆပါတယ်။ အားလုံးကို မမန်းပေမဲ့ မြင်ပါသည်။
၁၀ တန်က အခြောက်ကိစ္စဆွေးနွေးခန်းဖြစ်နေပြီ … တခြား ခေါင်းစဉ်ပြောင်းဆွေးနွေးကြပါအုန်းလား … လောကမှာ ဘာအရေးအကြီးဆုံးလဲ .. ပညာရေး ဆိုတာဘာလဲ … စွမ်းအားဆိုတာဘာလဲ …..
ပညာရေး ဆိုတာတော့ သိဘူး.. စွမ်းအားဆိုတာကတော့ စွမ်းအားပိုင်ရှင်တွေပေါ့.. တနည်းပြောရရင် စွမ်းအားရှင်.. သိတယ်ဟုတ်.. စွမ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အား ပိုင်ရှင်ကြီးတွေပေါ့..
လူတယောက်ကို တားမြစ်မိတဲ့ အကြွေး အခု ဆပ်လိုက်ပြီ.. သူတာဝန် ကိုယ်လွဲယူလိုက်သည်။